45 Khiyaanooyinka Eyga Waxaad Si Sahlan U Barikaran Eygaaga - Featured
Eyga Su'aalaha La Weydiiyo
45 Khiyaanooyinka Eyga Waxaad Si Sahlan U Barikaran Eygaaga
Barida tabahaaga eey waa hab fiican oo lagu dhisi karo xiriir hufan oo eygaaga ah halka aad baashaal badan kula jirto!
Khiyaamada ayaa sidoo kale ka caawin kara eygaaga inuu barto sida loo isticmaalo dhammaan qeybaha kala duwan ee jirkooda iyo inta badan oo dhan, waxay maskax ahaan kicin doontaa iyaga; iyaga oo ka caawinaya sidii ay maskaxdooda u haysan lahaayeen kuwo caafimaad qaba oo faraxsan.
Waxaan diyaarinay liistada oo dhameystiran oo ka badan 45 fikrado khiyaano eey ah! Marka soo qaado waxoogaa daaweyn ah oo dhadhan fiican leh, u qoondee 15 daqiiqo oo aad bilowdo inaad ka shaqeyso liiska!
Raadi Khiyaanooyinka Eyga
Dhibaato EasyasyMediumHardTypeTrickDanceObedienceSearch Tricks
Liiska Khiyaamada Eyga
Eygaagu wuxuu bartay inuu ku dhajiyo calaacashiisa gacantaada fidsan; sida gacan qaadka, laakiin ka sii fiican.
Si fudud 1 saac (yada) Fadhiiso
Heerka eygaaga, ku daawee daaweynta gacan xiran oo kor u jeeda.
Eygaaga ayaa baari doona, ur san doona, ugu dambayntiina 'gacanta' ka bixin doona. Waqtigan xaadirka khiyaanada waxaad dhahdaa ‘wanaagsan.’ Sii abaalmarinno cunno ah.
Ku celceli dhowr jeer, ka dibna gacantaada soo bandhig adoon cunnada ku darsan. Abaal marin ka dhig meesha ay ku hayaan bawdada.
Hadda dheh Paw, oo si fudud gacanta ugu taag fidsan. Marka eeygaagu wax ku dharbaaxo, dheh 'wanaagsan.' Abaal mar kale.
Hada waad kudarsankartaa adigoo haysta tartiib tartiib ah oo ruxaya.
2. Taabashada Gacanta
Xeeladani waxay baraysaa eeygaaga inuu u dhaqaaqo dhanka calaacasha oo ku buuxi sankooda!
Si fudud 1 saac (yada) Midna
Ka bilow labada gacmood gadaashaada iyadoo eygaaga uu hortaada joogo.
Ku dhaq dhaqaaq gacantaada adiga oo adeegsanaya calaacal furan (sidii aad qof u gacan qaadi lahayd) eeygaaga hortiisa. Eygaaga ayay u badan tahay inuu u dhaqaaqi doono xaggiisa oo uu uridoono, xilligaas oo uu dhahayo ‘wanaagsan.’ Oo uu ku abaalmariyo.
Gacantaada dib u dhig gadaashaada dhabarka oo ku celi dhowr jeer si ay ugu kalsoon yihiin inay u janjeeraan dhanka iyo inay la xiriiraan gacantaada sankooda.
Hadda waxaad dhihi kartaa 'taabasho' ka hor intaadan gacantaada soo bandhigin oo aad ugu abaalguddo si isku mid ah.
Marka xigta waa in la kordhiyo inta fog ee ay tahay inay u safraan si ay u yimaadaan bop gacantaada.
Si tartiib tartiib ah u kordhi masaafada aad ka istaageyso, si marka dambe ay uga soo gudbaan qolka oo ay kuugu soo ordaan oo ay gacantaada taabtaan.
Eygaaga wuxuu bartaa inuu ku socdo wareegga adag ee cue 'spin'
Dhexdhexaad 2 saac (yada) Midna
Eygaaga ha dhigo meel ‘cirib’ ah oo ka xigta lugtaada oo aad ugu jeeddo jihada aad adigu u jeedo oo kale.
Ku daawee gacanta gacan xiran ama farta iyo suulka dhexdooda oo dhig sankooda hortiisa ka dibna u dhaqaaji gacantaada wareegga kaa baxayo oo kaa sii fogaanaya (sida haddii aad dabaalaneyso xabadka naaska).
Markaad dhammaystirto wareegga, abaalmarin. Eeyaha qaarkood waxay ubaahan karaan xoogaa dhiirigalin dheeri ah khiyaanadan, sidaa darteed ku abaalmari ½ goobaabin, iyo wareeg buuxa oo aad kubilaabato si tartiib tartiib ah kadibna aad ugudhaqaaqdid kaliya abaalmarinta goobada oo buuxda.
Mar haddii ay taasi dheecaan tahay, waxaad hadda dhihi kartaa 'wareejin' (ama 'qallooc' 'leexo'.) Kadibna gacantaada ugu dhaqaaq si la mid ah uguna abaal mari sidii hore.
Ku celi dhowr jeer marna markay kalsooni ku qabaan dhaqdhaqaaqa
Waad yareyn kartaa sida ay tahay waajibka u ah jimicsiga aad sameyneyso mar kasta illaa aad si fudud u dhahdo ‘wareeji’ eeygaaguna uu u dhaqaaqo.
4. Trick Dhexe
Bar Eygaaga inuu yimaado oo istaago lugahaaga dhexdooda oo uu korkaaga eego.
Si fudud 2 saac (yada) Midna
Eygaaga hortaada ha ku bilowdo. Ku dawee gacantaada oo dhig sanka hortiisa.
Gacantaada tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu gadaal si gacantaadu ugu dhammaato lugahaaga gadaashiisa.
U diyaarso gacantaada kale si aad markaa ugu gudbiso daaweynta si aad lugahaaga u dhex marto, si aad ugu dhiirrigeliso ilmahaaga inuu u dhexeeyo lugahaaga dhexdooda.
Mar alla markii madaxooda iyo garbahoodu ay ka soo baxayaan lugahaaga dhexdooda, jooji dhaqaaqa gacantaada, sug waxoogaa ka dibna abaal mari.
Ku celi ilaa ay fiicantahay oo dareere tahay.
Kadib ‘dheh’ dheh ka dibna gacmahaaga u dhaqaaji sidii hore.
Waqti ka dib yaree inta aad ku muujinaysid gacan kasta oo aad samaynaysid si aad ugu dambayntii si fudud ugu odhan karto ‘dhexda’ oo ay ugu dhaqaaqaan booska saxda ah iyagoo ku eegaya adiga oo diyaar u ah abaalmarintooda.
5. Jaantuska 8
Bar eygaaga si aad u sameyso sawir 8 qaab ah adoo adeegsanaya lugahaaga.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Midna
Labada gacmoodba ha ku xirnaadaan daweynta gudaha labadoodaba.
Tartankan, dhig hal daaweyn-gacmeed meel u dhow sankaaga eyga si aad ugu dhiirrigeliso inay u guuraan. U jihee gacantaada gadaal iyo gadaashaada si aad ugu dambeyso gacantaada gadaashaada, lugahaaga dhexdooda.
Eygaaga ha raaco
Gacanta kale kula kulan gacantaada isla markiiba oo u dhaqaaji eeygaaga gacantaan hadda dhinaca kale ee adiga iyo gadaal gadaal si aad ugu dambeyso gacantaas gadaashaada iyo lugahaaga dhexdooda, ka dibna u abaal mari eygaaga.
Marka tani ay fududahay (adiga iyo eeygaaga labadaba), waxaad dhihi kartaa 'sawir' (ama weave) ka hor intaadan gacmahaaga dhaqaajin gabi ahaanba si aad ugu darto edbintaada afka ah.
Hadda ka shaqee si tartiib tartiib ah uga sii libdha inta jilitaan ee qayb kasta u baahan tahay.
6. Khiyaanooyinka Cagaha
Bar eygaaga in ay dhigaan farahooda hore shay inyar ka sarreeya (tallaabo, saxar, dhagax, jirrid geed) - tani waxay samaysaa sawirro aad u fiican.
Iyada oo shaygaaga aad dooratay uu kugu xigo, ku daawee gacantaada oo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah gacantaada u dhaqaaji sidaa darteed eeygaagu wuxuu raacayaa daaweynta oo wuxuu u qaadayaa tallaabooyin dhankiisa ah
Meesha barta ay cagahoodu ka gaarayaan cidhifka shayga, kor u qaad gacantaada si aad ugu dhiirrigeliso inay tallaabo qaadaan.
Isla markay cagahoodu saaraan sheyga, ‘wanaagsan’ dheh oo abaalmari.
Ku celi dhowr jeer ilaa dareeraha oo dhaho, 'cagaha kor u kac' ka dibna ku muuji si isku mid ah.
Mar alla markay kalsooni ku qabaan dhaqdhaqaaqa oo ay bilaabeen inay bartaan tilmaanta, waxaad bilaabi kartaa inaad kordhiso inta ay ku hayaan shayga ka hor intaadan ‘wanaagsan’ dhihin oo aad abaal marin u siiso.
Bar Eygaaga inuu fooraro, hoosna u dhigo qeybta hore ee jirkooda iyadoo hoosta ku haysa hawada.
Dhexdhexaad 4 saac (yada) Midna
Daaweyn ku hayso gacanta xiran oo dhig afkaaga sanka hortiisa.
Si tartiib tartiib ah hoos ugu dhig gacantaada oo si tartiib ah ugu dhaqaaq dhinaca laabta si madaxoodu waxyar hoos ugu dhaco oo lugaha hore ay u bilaabaan inay hoos u dhaqaaqaan.
Abaal mari khiyaanadan kahor intaan hoos loo dhaadhicin.
Ku celceli dhowr jeer ka dibna si tartiib tartiib ah u kordhi inta ay lugahooda hore hoos u sii dhacayaan ilaa ay ka galaan booska 'ciyaar'.
Abaal marin khiyaanadan markasta oo ay ku dhacaan booskan.
Ku dhammee adiga oo leh erayga 'qaanso' (mar labaad eeyaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay maqlaan 'hoos' marka calaamadda kale ee aad isticmaali karto waa 'foorar'.) Kadibna si isku mid ah ayey u muujiyaan.
Eyda qaarkood ayaa arintan ku adkaan doona hadii ay hada leeyihiin ‘down’ aad ufiican horeyna waxaa laga yaabaa inay ubaahanyihiin inaad gacantaada si tartiib ah u dhigto miskaha hoostooda si looga hortago dhamaadka dhabarkooda inuu hoos udhaco halkii uu leexin lahaa.
8. Madaxa rux
Baro khiyaanadan si eeygaagu u ruxo ama u ruxo madaxiisa.
Si fudud 2 saac (yada) Fadhiiso
Ku bilaw khiyaanadan eygaaga booska fadhiga.
Ku yeelo daaweyn dhadhan fiican farta iyo suulka dhexdooda.
U dhaqaaji daaweynta labada dhinacba (ama kor iyo hoos) si eygaagu u raaco dhaqdhaqaaqa daaweynta indhahooda laakiin ilaa heer ay iyaguna u baahan yihiin inay madaxooda u dhaqaajiyaan jihada aad rabto.
Mar hadday dhinac u kala jeesteen ama kor iyo hoos, ‘wanaagsan’ dheh oo abaalmari.
Ku celi dhowr jeer si ay u helaan fikradda ah in lagu abaalmariyo dhaqdhaqaaqa madaxa.
Hadda ku dar ereygaaga afka ah 'maxaad leedahay?'
Sii wad inaad dhaqaajiso gacantaada sidaad horayba u sameyn jirtay, ka dibna abaalmarin.
Ku celi dhowr jeer oo si tartiib ah u yaree inta aad tilmaamayso ee aad samaynaysid.
Bar eygaaga inaad dhigto sankooda / muuska wareegga gacmahaaga laga sameeyay.
Marka hore, ku samee goobada fartaada iyo suulkaaga sidaa darteed waxaa jira farqi yar (waa halkaan dooneyno in eygaaga sankiisu tago).
Qaado daawo oo dhig dhinaca daloolka si eeygaagu u dhigo sankooda godka. Siidaynta daawada mar alla markii ay sankooda godka geliyaan.
Hadda dhis waqtiga ay sankooda ku hayaan booskaas kahor intaadan abaalmarin.
Mar alla markay kalsooni qabaan, hadda waad ku dari kartaa ereyga 'snoot' ka hor intaadan goobadaada u soo bandhigin iyaga.
Haddii ay isla markiiba sanka saaraan halkaas, dheh ‘wanaagsan’ kuna abaalmari booskaas.
Haddii ay ka labalabeenayaan maxaa yeelay wax daawo ah oo iyaga sugaya ma jiraan, sug dhowr ilbiriqsi si aad u aragto haddii ay ka shaqeyn karaan, ka dibna abaalmarin.
Dhis waqtiga ay sankooda ku ruxanayaan booskaas kahor intaysan oran ‘wanaag’ iyo abaalmarin.
10. Ka bood bood Dheeri ah
Bar eygaaga khiyaanadan si aad uga boodo carqalad (tani waxay ku habboon tahay eyda ka weyn 1 sano jir).
Si fudud 2 saac (yada) Joog
Diyaarso toy-ga eyga u jecel yahay gacantaada oo ku fadhiiso dhinaca kale ee boodada fadhi / joogis.
U bood boodo runtii aad u hooseeya si aad u bilowdo.
Tag dhinaca kale ee boodka si aad toos ugu hor istaagtid hortooda oo aad u dhahdid 'over' oo aad gadaal u socotid si aad ugu dhiirrigeliso inay kuu yimaadaan
Markay ka boodaan boodada oo ay ku soo gaadhaan, la ciyaar ciyaar fiican iyaga runti.
Ku celi dhowr jeer si ay u bartaan in khiyaanada ‘ka weyn’ ay ka dhigan tahay ka bood boodka.
Hadda bilaw inaad u istaagto dhinaca oo aad ku celceliso.
Dheh ‘dhaaf’ oo markay sii gudbaan dheh ‘wanaag.’ Oo ciyaar wanaagsan la yeelo markay soo degayaan.
Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad ku darto boodbood kale ka dib adigoon fadhiisan / joogin inta u dhexeysa.
11. Isu-rogo Mat Yoga ah
Bar eygaaga inuu kaa caawiyo inuu kuu diyaariyo yoga.
Dhig tuwaalka ama gogosha yoga si siman hortaada u jiifso ka dibna duub.
Markaad rogto sariirta, ku qari daaweyn duudduub kasta illaa uu gebi ahaanba duuban yahay marka laga reebo laga yaabee 5cm dhamaadka oo leh waxyaabo lagu rusheeyey.
Eygaaga u soo kaxee oo u oggolow inuu sahaminta tuwaalka / dhiirrigeliyo oo farta ugu fiiqo daaweynta uu arki karo oo cuni karo.
Marka hore waad ‘caawin kartaa’ adiga oo yara furaya haddii aad u baahato.
Dib-u-soo-celinta badan, hayso daaweyn ka yar iyo ka-yar oo ku qarsoon tuwaalka sidaas darteed waa is rogrog siman.
Kudar tilmaanta ‘ma waxaad rabtaa inaad xoogaa yoga sameyso?’ (Ama waxkastoo aad jeceshahay.) Kahor intaadan shukumaanka hoos dhigin mar haduu kalsooni qabo.
Bar eygaaga in uu kuu soo gurguurta Kumaandooska.
Si fudud 2 saac (yada) Hoos
Weydiiso hoostaada inay gasho khiyaamada jiifka.
Ku hayso daaweyn yar gacanta xiran oo dhig meel u dhow sanka eygaaga si ay u urin karaan.
Gacantaada si tartiib tartiib ah dib ugu soo celi, gacantaada waxyar ka hooseeya sanka eygaaga si aad uga hortagto inaad ku dhiirrigeliso inay kici karaan.
Isla marka eeygaagu horay isu shaandheeyo, tan u abaalmari.
Sii wad abaalmarinta isku-shaandheyn kasta oo hore ah illaa ay ku kalsoon yihiin dhaqdhaqaaqan
Hadda waad ku abaalmarin kartaa dhaqdhaqaaq kasta oo kale khiyaanadan oo aad dhistaa illaa iyo inta ay u dhaqaaqayaan ka hor intaan la helin daaweyn.
Mar alla markii ay awoodaan inay isku shaandheeyaan hal mitir ama wax la mid ah, hadda waad bilaabi kartaa inaad ku darto tilmaantaada afka ah- dheh 'gurguurto' ka dibna u soo jiid si la mid ah sidii aad markii hore ahaan jirtay.
Dib u soo noqoshada, waxaad awoodi doontaa inaad yareyso inta duufsan ee aad sameyneyso mar kasta.
13. Fadhiiso Dhagar Qurux Badan
Bar Eygaaga inuu ku fariisto boolahooda iyagoo cagaha kor u qaadaya.
Dhexdhexaad 4 saac (yada) Fadhiiso
Weydiiso eeygaaga inuu fadhiisto.
Ku hayso faro wax ku daweyn ah gacantaada xiran oo ku soo fuulo sanka eygaaga hortiisa adigoon u oggolaan inay wax haystaan.
Si tartiib tartiib ah gacantaada kor ugu qaad si ay madaxa kor ugu qaadaan, sida ugu dhakhsaha badan ee aad mid (ama xitaa labadaba) cagaha hawada sare u hesho, abaal mari.
Mar alla markii ay si kalsooni leh kor ugu qaadayaan cirbadaha, haddaba si tartiib tartiib ah u dheeree waqtiga ay dhabarka ku hayaan oo baabba'ayaan dhammaadka, ka hor inta aan la abaalmarin.
Ku celcelinta in ka badan ayay sii xoogaysan doonaan oo awood u yeelan doonaan inay qabtaan booskan.
Ku bilaw inaad kudarto ereyga hadalka- waxaad dhahdaa 'beg / pretty / say please', ka dibna si isku mid ah u soo jiid.
Khiyaanadani waxay u baahan tahay muruqyo adag oo adag sidaa darteed ha filanin boos toos ah isla markaaba, ku dhis muruqyadooda adoo adeegsanaya ku celcelin iyo si tartiib tartiib ah u dhisaya awooddooda ay ku hayaan booska.
14. gadaal gadaal u soco
Bar eygaaga inuu gadaal gadaal kaaga socdo isagoo saf toosan ku socda.
Eygaaga ha ku hor istaago oo meel daaweyn ah ha dhigin gacan xiran.
Gacantaada saar sanka eygaaga oo si tartiib ah ugu dhaqaaji asaga si uu dib ugu celiyo tillaabo si uu u awoodo inuu urin karo, isla marka uu tallaabo qaado dheh ‘wanaagsan.’
Ku dhis inta dhaqdhaqaaq eeygaagu ku sameeyo khiyaanadan abaalmarin kasta.
Ka bilow hal talaabo, ka dib laba talaabo, ka dibna 3 iwm markaa isagu marba marka ka dambaysa wuu u sii soconayaa.
Ku billow inaad dhahdo 'gadaal' ka hor intaadan gacantaada xaggiisa u dhaqaaqin oo sug inaad gadaal u dhaqaaqdo si kastaba ha noqotee talaabooyin badan oo aad ilaa hadda u tababartay.
Ku celi tan dhowr jeer, illaa 5 ama 6aad tag, si fudud u dhah ‘dib’ oo sug inuu iskiis u dhaqaaqo.
Hadda kaliya ka dhig dheecaan dheeri ah adoo ku celcelinaya wax badan oo filaya dhowr tallaabo mar kasta.
15. Is rog roga
Baro khiyaanadan si eeygaagu u rogo
Weydiiso eeygaaga inuu jiifsado oo uu ku haysto gacan muggeed oo daaweyn ah gacantaada xiran.
Saar gacmahaaga xiran oo lagula dhaqmayo midig sankooda oo gacantaada si tartiib ah ugu dhaqaaji wareegga si ay u raacaan.
Tani waa ugu fududahay in loo sameeyo eeygaaga haddii ay ku jiraan 'dabacsan' oo midkood sinta hoose la geliyey.
Waxaad raadineysaa eeygaaga inaad rabto inaad raacdo daaweynta oo dhan si markaa jirkiisa oo dhan uu ugu rogo khiyaanadan - hubi inay tahay mid dhadhan fiican leh.
Abaal marin mar uu dib uga soo laabtay dhabbihii saxda ahaa.
Xeeladani waxay ku habboon tahay eeyaha jir ahaan u habboon - eeyaha waaweyn ama kuwa arthritic-ka ah ayaa laga yaabaa inay tan u helaan wax aad u baahan.
Bar Eygaaga inuu garaaco jalaska markii lagu weydiisto.
Diyaarso daaweyn macaan oo kuu dhow oo dawanka gadaashiisa ku qari.
Gambaleelka hor dhig eygaaga oo sug inta ay ka urinayaan- ‘wanaagsan’ dheh oo abaalmari.
Gambaleelka ka saar.
Hadda markay ku kalsoon yihiin soo dhawaanshaha gambaleelka oo ay ogaadaan inay abaal-marin ka helayaan la-macaamilkeeda, waxaan hadda sugi karnaa is-dhexgal kala duwan- tuubada leh bawdada.
Isla marka ay cagtooda u dhaqaajiyaan xaggeeda, ama runtii la xiriiraan dawanka, dheh ‘wanaagsan’ oo abaalmari.
Ku celi dhawr jeer.
Markay ku guuleystaan ​​inay garaacaan gambaleelka guud ahaan dhowr jeer, waxaad noqonkartaa mid si gaar ah ugu qaas ah waxa ay u baahan yihiin inay riixaan- haddaba soo bandhig gambaleelka laakiin kaliya ku abaal mari markay garaacaan jalaska iyagoo garaacaya.
17. Dib U Dhig Ujeedo
Bar eygaaga inuu gadaal u socdo barna dhabarkiisa dhabarka dhig shay kor u kacay.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Gadaal u soco
Hayso sheyga aad dooratay (cabirka ku habboon cabbirka eeyga) iyo daawooyin faro ku tiris ah.
Eygaaga ku sasab shayga si marka horeba ay u yeeshaan cagaha hore, ka dibna u soo baxaan markaa kaliya dhabarka dhabarkooda ayaa ku haray kuna abaalmari sida ugu dhakhsaha badan ee ay ugu jiraan booska saxda ah.
Ku celi tan dhowr jeer ka dibna ka soo jiito dhinacyo kala duwan.
Hadda tallaabo ka fogow shayga eygaaga oo dib ugu celi shayga adoo adeegsanaya shay gacmeed oo u dhaqaajinaya xaggooda - waa laga yaabaa inay ku dhacaan markii hore laakiin maadaama ay khibrad badan u leeyihiin dhabarka dhabarka dushiisa waa inuu barto inuu 'ka helo' shayga dhabarka dambe dhabarka.
Kudar ficilka hadalka ah 'kac' oo ugu celi si isku mid ah. Mar alla markii ay ku dareeraan khiyaanadan eeygan waxaad si fudud u oran kartaa tilmaanta hadalka oo aad ka sugtaa inay jawaab ka bixiyaan ka hor inta aan la abaalmarin.
Mar alla markii ay ku fiican yihiin hal shay, iskuday inaad isticmaasho shay ka duwan.
18. Garka Dushiisa
Bar eygaaga inuu 'u muuqdo mid murugaysan' oo garkiisa dhig dhig inta u dhexeysa muruqyadooda dabaqa.
Si fudud 1 saac (yada) Hoos
Si aad u bilawdid barashada khiyaanadan eeygan, weydii eeygaaga inuu jiifsado ka dibna ku muuji gacanta xiran ee daweynta sankooda.
Si tartiib ah hoos ugu dhig gacantaada ilaa garka ay ku dhacaan dhulka, markaas oo aad dhahdo 'fiican' oo abaalmari.
Ku celceli waqtiyadan badan illaa ay ka dareerayaan oo ay ku hayn karaan booskaas dhowr ilbiriqsi sidoo kale.
Hadda ku dar calaamadda 'garka' ama 'murugada' oo si isku mid ah u sasab.
Marka ay awoodaan inay tan sameeyaan dhowr jeer, si fudud u yaree inta jilicsan ee aad samaynaysid markasta.
Bar Eygaaga inuu u istaago sida dadka oo kale; xeelad aad u xiiso badan!
Eygaaga ha ku taagnaado istaag ka dibna si fudud ugu daawee gacantaada qaarna ka dhaqaaji gacanta sanka sankooda kor.
Ku abaalmari dhaqdhaqaaq kasta oo ay lugaha hore ee dhulka ka saran.
Marka ay si kalsooni leh ugu istaagaan lugaha dhabarka, kordhiya muddada ay ku sii hayn karaan booskaas.
Hadda dheh calaamaddaada 'istaag.'
Si isku mid ah u sasab oo iyaga oo sii wadaya inay noqdaan kuwo la isku halleyn karo, yaree inta duufaan ee aad sameyneyso mar kasta.
20. Ku Soco Wareeg Dhoob
Bar eygaaga inaad isku dheelitirto oo aad ka dul marto laambad.
Si fudud 1 saac (yada) Loox loox ah oo ballaciisu yahay ugu yaraan 15cm
Marka hore loox alwaax ah dhig sagxadda oo hubi inuusan ruxin. 10 cm kasta ama wax daaweyn ah ayaa la dhigaa.
Eygaaga ha kuu xigo bilowga khiyaanada u jeedka looxa. Hayso gacan buuxda oo daaweyn ah si aad uga caawiso iyaga inay ku soo jiidaan looxa si ay dhammaan afarta cagood halkaas ugu jiraan.
U oggolow eeygaaga inuu si tartiib tartiib ah u helo daaweyn kasta oo loox leh.
Ku celi tan dhowr jeer si aad u barato khiyaanada ka dibna u isticmaasho daaweyn ka yar hareeraha loox markasta.
Hadda waxaad isku dayi kartaa in looxa waxyar kor looga soo qaado dhulka.
Waqtigan la soco eygaaga oo ku abaalmari iyaga oo ku dul socda laambadda kula socota.
Mar alla markii aad kalsooni ku qabtid in aysan ka dhici doonin, dib u deji mar labaad isla markaana hal daaweyn uun ku dhamayso.
Kudar astaamo 'ku dulbabaar' oo ku carbiso daaweynno yar iyo kuwa kayarba mar kasta- laakiin had iyo jeer abaalgud leh dhammaadka.
21. Udub Isdhaafka Shayga
Bar eygaaga inay farahooda ku dhajiyaan shay oo ay ku dul wareegaan lugaha gadaashooda.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Lugaha kor
Eygaaga u soo jiid shayga sidii aad ugu samaysay cagaha korkiisa.
Markey jagada hayaan, ha abaal marin.
Hada naftaada u dhaqaaji si aad waxyar uun dhinaca u noqotid halkii aad ka hor mari lahayd ama ku xigi lahayd, eeyadu badanaa isku shaandhayn si ay kuugu arki karaan si fudud, oo markan waxaad dhahdaa ‘fiican’ oo ku abaal mari.
Ku celi dhowr jeer illaa aad ka hesho goobada wareega oo buuxda.
Abaal marin meel kasta oo dhaqdhaqaaq ah inta lagu jiro khiyaanada.
Hadda libdhi inta dhaqdhaqaaq ee aad samaynaysid (laga yaabee inaad gacanta uun ku muujisid, ama cagahaaga ku rux halkii aad tallaabo ka qaadi lahayd) oo ku abaalmari dhaqdhaqaaq kasta oo iyaga ka yimaada.
Waqti ka dib iyo ku celcelinta eygaagu waa inuu bilaabaa inuu u dhaqaaqo si dheecaan leh oo badanaaba daaweynno yar ilaa ay ka samaynayaan wareeg buuxa iyagoon wax caawinaad ah idinka helin.
Bar eygaaga inuu shay ku qabsado afkooda.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Fadhiiso
Hesho shay si fiican ugu dhejin doona afka eygaaga.
Toy toy wareegsan ama shay kale oo amaan ah.
Ku dhiirigeli eygaaga inuu ku qabsado alaabta ay caruurtu ku ciyaaraan ee ku jira afkooda, markaas oo isla markaaba la yiraahdo ‘wanaagsan’ oo ku abaalmari cunto daaweyn.
Uma baahnid inaad u oggolaato inay ku ciyaaraan sidan oo kale.
Hada dhisida khiyaanada leh ilaa iyo inta ay alaabada ay ku hayaan ay u qaban doonaan- iyada oo ujeedadu tahay 1 ilbidhiqsi.
U soo bandhig alaabada ay ku ciyaaraan, markay qaataan waxay sugaan ilbiriqsi ka dib ‘wanaagsan’ oo ku abaal mar.
Bar eygaaga inuu sanka ka qabsado dhabanka; khiyaano qurux badan
Si fudud 2 saac (yada) Sanoot
Marka hore, xeeladan, ku baro eygaaga inuu sanka taabto farta fartaada koowaad- fartaada u sii eygaaga ka dibna ‘wanaagsan’ ku dheh oo ugu abaal mari markuu taabto.
Samee muddada inta uu sankiisa farta ku qaban doono ilaa 5 ilbidhiqsi.
Hada bilaw inaad u dhaqaajiso fartaada dhanka dhabanka- u soo bandhig si dhow iyo si dhow, adoo abaal marinaya eygaaga markasta oo ay fartaada taabtaan 5 ilbidhiqsi iyadoon loo eegin booska fartaada.
Ugu dambayn farta saar si aad u tilmaamayso / u taabatid dhabankaaga.
Ku abaal mari eygaaga taabashada farta iyo haysashada booska 5 ilbidhiqsi markale (waxaad ubaahan kartaa inaad dib u dhisto waqtiga si tartiib tartiib ah booskaan cusub).
Hadda ku dar tilmaantaada 'dhunkasho ma heli karaa'? fartaadana dhabanka saar.
24. Wave Trick
Bar Eygaaga inuu kuu gacan haadiyo adiga.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Paw
Ugu horreyn gacantaada dhig isla meel aad rabto sidii aad u doonaysid bawdkiisa oo aad ugu abaalguddo inuu cagtiisa dhigo.
Hadda sii kordhi dhererkaaga meelaynta gacanta si markaa waa inuu inyar inyar ka sii gaadho, abaalmarin markuu cagtiisa dhigo.
Mar hadduu ku faraxsan yahay inuu weli gacantaada calaacasha ka sarreeyo, hadda markuu isku dayo inuu calaacalayo, gacantaada wax yar ka saar jidka oo ku dheh ‘fiican’ markuu isku dayo, abaalmarinna.
Ku celi illaa uu dhowr jeer isku dayayo inuu gacantaada helo oo abaalmarin ka bixiyo dhawr ‘hirar’ kadib.
Hadda ku dar calaamadahaaga 'ruxrux' isla markaana si sax ah u samee.
Iska yaree inta aad gacanta ku muujineyso ee aad sameyneyso si aad eygaaga ugu suurtagasho inuu u gacan haadsho oo keliya codsi afka ah.
25. Albaabka Xidho
Bar eygaaga inuu baro albaabka xir.
Marka hore baro eygaaga inuu taabto warqad qoraal ah.
Soo bandhig qoraalka kadib, iyo abaalmarinta isdhexgalka sanka ama bawdada (taas oo kuxiran cabirka eyga).
Hadda ku dheji boostada qoraalkeeda dhererka la gaari karo ee albaabka aad rabto inaad baraan inuu xiro oo ku abaalmariyo inuu taabto ama ku dhejiyo.
Haddii uu ku kalsoon yahay khiyaanadan, hadda ka jooji abaalmarinta illaa uu ka yeelo albaabka xoogaa inuu dhaqaaqo si uu u xidho iyo marka uu si ku filan u xiro (buuq sameeyo), ku abaal mari.
Hadda wax yar sii fur albaabka oo ku celi. Sii wad ilaa albaabku ka furnaan karo eeygaaguna uu aadayo inuu xiro.
Kudar tilmaantaada 'albaabka xidho' oo dhowr jeer ku celi - iyada oo boostada ay ku qoran tahay wali meeshiisii.
Mar alla markii ay kalsooni qabaan oo ay fahmaan tilmaamaha, ka saar boostada ay ku qoran tahay oo ku dhah tilmaanta iyo abaalmarinta marka albaabku xirmo.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dhisto fogaanta albaabka la furayo mar kale markaad tirtirto qoraalka boostada.
26. Sir ii Sheeg
Bar Eygaaga inaad sankiisa ka riixdo dhagtaada sidii isagoo kuu sheegaya sir.
Dhexdhexaad 2 saac (yada) Dhunkasho
Marka hore ka yeel qaabka ku-duubka gacantaada sidii aad isku dayeysay inaad wax dhageysato.
Marka hore, waxaan rabnaa inaan barano eyga inuu masarkiisa ku cadaadiyo calaacasha gacantaada.
U soo bandhig gacantaan qaabeysan eeygaaga oo ugu horreyn ku abaal mari isaga oo dhuuqaya ama la falgalaya sidii aan ugu qabannay taabashada gacanta.
Markuu ku kalsoon yahay tan, hadda dhis waqtiga uu sankiisa ku haysto halkaas ugu yaraan 5 ilbidhiqsi.
Hada bilaw inaad udhaqaaqdo tan dhagta ka soo horjeedka ah illaa aad ka dabooleyso (gacantaada- sidaas darteed waxaad tahay cudud jirkaaga u dhaqaajiso si aad dhegtaada uga daboosho xagga hore) uguna abaal mari eygaaga inuu sii wado inuu sankiisa ku haysto 5 ilbiriqsi. .
Kudar tilmaanta hadalka ‘sir ma ii sheegi kartaa?’ Oo ku celi.
27. Sheyga Riix
Bar eygaaga si aad u riixdo gaari toy ah.
Ku soo bandhig sheyga cusub eeygaaga hortiisa oo ku bilow khiyaanadan adigoo sugaya qiiq ama isdhexgal ka dibna dhaha 'wanaagsan'. Abaal mari oo ka saar sheyga.
Hadda dib u soo bandhig shayga oo sug in yar oo isdhexgal ah - sanka taabasho ama isku shaandheyn oo dhah ‘wanaag’ iyo abaalmarin.
Dib u soo noqoshada khiyaanadan, eeygaagu waa inuu taabtaa shayga si aad iyo aad u badan, waana inaad kordhisaa inta taabashada ah ee aad u baahan tahay ka hor inta aanad abaalmarin wakhti kasta.
Haddii sheygu dhaqaaqo, abaalmarin labalaab.
Hadda si fudud u dhis inta ay shayga dhaqaajinayaan, ama inta jeer ee ay sanka ka sanka si ay u dhaqaajiso.
Bar Eygaaga inuu keeno shayga aad hadda tuurtay; khiyaano caadi ah
Marka hore, hel alaabada caruurtu ku ciyaaraan eeygaagu jecel yahay inuu qabto ama uu xiiseeyo ku filan inuu ku soo qaato khiyaanadan.
Alaabada ay ku ciyaaraan si toos ah hortaada u soo dhig oo ku dheh ‘fiican’ isla marka eygaagu soo qaado oo uu madaxa kor u qaado mar kale.
Tan sii dhis ilaa uu ku heysto tooyga hortiina ilbiriqsi ama labo sidaa darteed adigu intaadan abaalmarin.
Hadda si isku mid ah ugu celi laakiin ka hor intaadan ‘wanaagsan’ oran, gacantaada saar tooyga, si uu isagu alaabada ugu tuurayo gacantaada.
Ku celi ilaa tan lagu kalsoonaan karo.
Hadda waad dhisi kartaa illaa iyo intaad u tuurayso toy-ga. Ka bilow adiga oo waxyar uun kaa sii sii dhacaya, markaa eeygu waa inuu ku soo noqdaa oo uu si sax ah u sameeyaa.
Dib u soo noqoshada iyo dhowr kalfadhi, waxaad awoodi doontaa inaad iska tuurto toy-ka oo sii fogaanaya oo kaa sii fogaanaya, eygaaguna wuxuu ku soo noqonayaa inuu kuugu dhowaado isagoo alaabta ku ciyaaraya afkiisa.
29. Lugaha iskutallaabta
Bar eygaaga inuu si xarrago leh u seexdo.
Dhexdhexaad 3 saacadood (yada) Hoos
Layli ku samee waxoogaa ‘baal’ ah oo ku abaal mari sidaa darteed waxaa lagu xasuusinayaa khiyaanadan.
Hadda weydiiso hoosta oo weydii mar labaad baw iyo abaalmarin.
Tani waxay dareemi kartaa inay ka duwan tahay iyaga markaa ku celceli qaybtaan khiyaanada ah dhowr jeer sidaa darteed waxay si kalsooni leh kuugu siinayaan bawdada waxayna ku sii nagaanayaan hoosta.
Mar alla markay kalsooni qabaan, haddaba si tartiib ah u dhaqaaji baabkooda si ay ugu dul degto bawdada kale (oo markaa ka gudubta) oo dhahdo 'wanaagsan' isla markaana si toos ah ugu abaalmari.
Halkaas ku sii abaalgud iyaga inta ay le'eg tahay oo ay cagaha ka sii gudbayaan- oo jooji abaalmarinta haddii ay ka qaadaan cagaha.
Ku celceli farabadan si ay u bartaan inay ku hayaan cagtooda meeshaas.
Hadda bilaw inaad gacantaada u dhigtid dhinaca cagtooda dambe si aad ugu dhiirrigeliso inay dhabarka ka siiyaan dhinacaas oo ay isweydaarsadaan bawloshooda - abaalmarin mar kasta oo ay ku dhufato bawdada lugta kale oo ay halkaa ku hayso 5 ilbidhiqsi.
Hadda ku dar ereyga hadalka ee 'iskutallaabta'. Dheh cuebka ka dibna si sax ah ugu dhaqan isla, ka hor inta aanad joojin tilmaanta oo aad uun dhahdo tilmaamaha.
30. Socod Wareeg A Koon
Bar eygaaga inuu ku wareego koor (ama shay kasta).
Ku dheji koorta dabaqa eeygaaga hortiisa kuna abaalmari inaad u dhaqaaqdo xaggiisa - ha taaban.
Ka tuur daawada ka soobaxda koonta si aad ugu sii wado abaalmarinta dhaqdhaqaaqa dhinaca koorta marka xigta.
Waxoogaa ku celcelin ah ka dib imminka sug eygaaga inuu gaaro koonka oo ku abaalmariyo dabaqa dhinaca kale ee koorta si ay ugu wareegaan.
Waqtigaas ka dib mar labaad u abaalmari iyaga oo ka tuuraya daaweyn ka fog koorta mar kale si ay u noqdaan wareeg buuxa oo koorta ah.
Ku celi dhowr jeer ka dibna isku day inaadan abaalmarin wareegga nuska.
Markii ay helaan fikradda wareega wareega koonta, hadda waan kordhin karnaa illaa iyo inta ay u safrayaan si ay u gaadhaan koontaroolka.
Tallaabo ka fogow koorta oo ku celi, ka dibna dhis ilaa intee eeygaagu soconayo.
Hadda ku dheji calaamadda khiyaanada ah 'ku wareegsan' ka hor inta eeygaagu uusan dhaqaaqin.
31. U bood Dib u Laab!
Bar eygaaga inuu ku boodo dhabarkaaga.
Adag 4 saac (yada) Isu dheellitirka
Si aad u bilawdo khiyaanada, waxaad u baahan tahay inaad ku socoto afarta lugood si aad naftaada u xasiliso - laakiin aad gacanta ugu diyaar ahaato daawooyinka qaarkood sidoo kale.
Waxaan u baahanahay inaan ku dhiirrigelino eeyga in badan oo ka badan si aad u dhigto afarta lugood ee dhabarkaaga ah - oo aad gacmahaaga u maareysid si aad sidaas u yeeleyso
Abaal marin nus ah isku day inaad ku bilowdo ka dibna ugu dambayn bood buuxa.
Hadda waxaad dhisi kartaa xooggaaga asaasiga ah oo aad ku tababaran kartaa inaad isla dhaqdhaqaaqa ka sameyso eeygaaga, laakiin adiga badhkood ayaa istaagaya, oo dhisa waqtiga ay halkaa ku qaataan.
32. Luggooyo Lugood
Bar Eygaaga khiyaano xiiso leh si uu lugahaaga u dhex maro marka aad socoto.
Si fudud 3 saacadood (yada) Jaantuska 8
Ku bilaw khiyaanadan adoo gacanta ku daweynaya isla markaana ku tababbar inaad labada gacmood u kala dhaqaaqdo dhinac ilaa dhinac.
Lugahaaga u kala qaad sidii aad talaabo horay u qaadi lahayd oo eeygaaga u soo jiid lugta lugta hore si aad adigu uga bilowdo hortaada oo uu kuugu dambeeyo gadaashaada
Lug kale ku qaado tallaabo oo ku celi.
Qaado runtii dheecaankan si eeygaagu uusan uga waaban inuu raaco gacmahaaga ama u joojiyo u dhaqaaqida lugaha dhexdooda (wareejinta wanaagsan ee gacantu soo jiidaneyso ayaa halkaan waxtar leh).
Yaree inta duufso ee aad u baahan tahay inaad isticmaasho, sidaa darteed waxaad 'muujineysaa' gacanta ka dambeysa lugtaada laakiin markaa kaliya waxaad ku abaalmarinaysaa dhinacaaga oo waxaad kordhinaysaa inta tallaabo ee aad qaadayso.
33. Xishood noqo
Bar eygaaga inay baarkooda saaraan sankooda.
Si fudud 3 saacadood (yada) Hoos
Qaado xoogaa yar oo cajalad dhejis ah iskuna duub si labada dhinacba ay u dhegaan.
Dhig sankooda inta ay fadhiyaan ama hoos fadhiyaan, oo dheh ‘wanaagsan’ oo abaalmari isla marka eygu isku dayo inuu cajaladda sanka ka saaro.
Ka qaad cajaladda abaalmarin kasta ka dib.
Ku abaalmari dhaqdhaqaaq kasta oo baabac ah markan - haddii eeygu sankiisa ku taabto dhabarkiisa, ku abaalmari waxyaabo fiican oo dheeri ah.
Hadda waxaad ku dari kartaa ereyga hadalka ah 'miyaad xishoonaysaa?' Khiyaanada.
Ugu sii soco si sax ah isla sidii aad ugu sii abaalmarin lahayd dhaqaaqa cagaha xagga ama sanka.
Marka eeygu si isdaba joog ah u sameeyo taabashada sanka oo leh calaacalkooda, hadda ha isticmaalin cajaladda. Si tan loo sameeyo, iska dhig inaad sanka gashato cajalad (u dhaqaaqa gacanta), oo dheh calaamaddooda, ka dibna abaalmarin isku dayga.
Ugu dambeyntiina, yaree inta gacanta lagu muujinayo ee aad iyaga ku sameyneyso meesha ugu horeysa oo kaliya isticmaal tilmaamaha.
Bar Eygaaga inuu gadaal gadaal kuugu socdo.
Adag 4 saac (yada) Gadaal u soco
Ku daawee labada gacmood khiyaanadan oo eeygaaga ha kuugu xigo booska caadiga ah ee 'ciribta'.
Hal gacan ku bilow inaad si tartiib ah ugu dhaqaajiso isaga (sida sida aan wax u baranay u socod gadaal) laakiin markaa toos u soco dhaqdhaqaaqa dhabarkaaga dambe.
Kadib ku abaalmari maadaama aadan sii gaari karin ka hor inta aanad kula kulmin gacantaada dambe ee dhabarkaaga isla markaana aad u sii wadato isla dhaqdhaqaaqa noocaas ah ee xaggooda ah ilaa ay dib kuugu soo laabtaan hortooda.
Abaal mar kale iyaga.
Gacantaada kale dib ugu soo celi ka dibna sii wad u dhaqaaq xagga iyaga iyo hareerahooda illaa ay dib ugulaabanayaan meeshii cidhibta asalka ahayd.
Mar alla markay kalsooni badan ku qabaan dhaqdhaqaaqa, waad yareyn kartaa abaalmarinta inta u dhexeysa oo kaliya waad abaalmarin kartaa dhammaadka.
Hadda waxaad ku dari kartaa calaamadahaaga hadalka 'orbit' ka dibna hoos u dhig inta tilmaanta gacanta ee aad sameyneyso.
35. U bood hubka
Bar eygaaga inuu ku siiyo kuus kuus.
Adag 4 saac (yada) Midna
Ku bilow inaad fadhiisatid lugaha lugta oo lugta leh iyadoo eeygaaga uu dhinacaaga yahay.
Ku sasab dhabtaada si uu u yeesho afar farood labada lugoodba.
Ku celi ilaa ay tan dareere tahay oo uu ku kalsoon yahay inuu kugu dul istaago.
Waad ku dari kartaa erey afeed 'up up' markii uu si kalsooni leh u fuulo.
Hadda hel kursi si aad waxyar kor ugu kacdo oo eygaagu u fadhiisto dhinaca kursiga ka dibna u dhaho 'kor u kac' oo u soo jiid si la mid ah sidii aad dhulka u sameysay oo kale - abaalmarin markii uu dhabtaada kor u kaco markale.
Markuu ku kalsoonaado dhaqdhaqaaqan, hadda waad iska saari kartaa kursiga, oo waxaad bilaabi kartaa kordhinta dhererka dhabtaada.
Mar labaad ku billow adigoo ku foorarsanaya sagxadda iyadoo jilibka ugu dhow eygaagu kor yahay. Dheh 'kor u qaad' oo soo jiid mar labaad oo abaalmari markii uu ku soo boodo jilibka oo aad hadda ku taageerto jirka intiisa kale gacantaada kale.
Hada bilaw inaad si tartiib tartiib ah u istaagto sidaa darteed markasta waxaa yaraanaya taageerada jilibka.
36. Duub Trick
Bar Eygaaga inuu isku rogo bustehiisa.
Adag 4 saac (yada) Hoos
Ugu horreyn, Ku tababar inaad busteha ku hayso afkiisa.
Abaal marrin ka dib markaad ka soo qaaddo dabaqa oo aad adigana hayso.
Samee tan adigoo marka hore u bixinaya buste sidaad caadada u ahaan laheyd inaad xajisato, ka dibna si tartiib tartiib ah hoos ugu dhig bustaha sagxadda sagxad kasta ‘qabasho’.
Hadda ku celceli 'rogrog' halka bustaha la dhigay, abaalmarin badan oo duub kasta.
Hadda isku dar labada
Eygaaga ha dhigo bustaha, ka dibna xoogaa buste ah inta u dhexeysa labadiisa lugood dhex dhig- ku filan inuu ‘ku qabto’ afkiisa.
Mar alla markii uu 'haysto' bustaha, weydii inuu is rogo - haddii uu maamulo qabashadiisa iyo duudduub- abaalmarin. Hadduu bustaha tuuro, ha abaalmarin.
Ku celcelinta jimicsiga illaa dheecaankiisu ka baxayo. The waxaad ku dari kartaa tilmaamahaaga hadalka ee 'duub.' Kahor intaadan bilaabin taxanaha oo dhan.
Bar eygaaga inuu ku ciyo calaamadda.
Haddii eeygaagu ciyo sida la saadaalin karo xaaladaha qaarkood, waxaad dhihi kartaa 'wanaagsan' oo abaalmarin jilif.
Haduu markale ciyo, ku celi.
Hadda kahor intuusan ciyin, dheh ‘hadal’, oo ma inuu ciyo ayuu dhahaa ‘wanaag’ iyo abaalmarin.
Ku abaal mari intaas ka dib fadhiisasho, ama hoos (ama wax kale) laakiin ciyo ka dibna dhaho ‘hadal’ iyo haddii uu ciyo. Abaalgud isaga qaybtan khiyaamada ah.
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in midkan si wanaagsan loo baray si eeygaaga kaliya u ciyo markii la weydiisto.
Haddii uu kugu caayo adiga oo aanad weydiisan ka dib marka aad ku darto tilmaanta. Ha abaal marin.
38. Ka bood Hubka dhexdiisa
Diyaar ma u tahay eeyga circus?! Xeeladani waa mid la jecel yahay.
Si fudud 3 saacadood (yada) Fadhiiso
Ka bilow shaqada albaabka.
Eygaaga ha yaal dhinac dhinac albaabka, iyo daaweyn dhinaca kale ee albaabka u jirta 1 mitir iyaga ka fog.
Weydiiso eeygaaga inuu fadhiisto oo uu sugo si aysan u xadin daaweynta.
Dhig hal gacan qiyaastii 5-10 cm (waxay kuxirantahay baaxada eyga) albaabka dushiisa si eygaagu kor ugu boodo gacanta si aad uhesho cuntada marka lagasii daayo ‘iyada oo loo marayo.’
Waxaa laga yaabaa inaad marka hore u baahan tahay inaad dhulka ku garaacdo gacanta kale.
Mar alla markii ay ku kalsoon yihiin tan oo ay si kalsooni leh ugu socdaan gacantaada markii laguu sheego 'iyada oo loo marayo' waxaad samayn kartaa si isku mid ah laakiin waxaad ku abuuri kartaa buro gacmahaaga. Ku celi dhowr jeer si ay ugu kalsoon yihiin inay marayaan gacmahaaga.
Hadda ha ku daaweynin dhinaca kale ee gacmahaaga laakiin u dheh 'iyada oo loo marayo' si isku mid ah, oo markay ka soo boodaan, ka abaalmari boorsadaada daaweynta. Bilaw inaad ku tababbarto meelo kale hadda.
Hadda waad kordhin kartaa dhererka ay ka soo boodayaan si aad daaweyn si tartiib tartiib ah ugala soo baxdid dhulka hoostiisa ilaa iyo sida sare eeygaagu u awoodo inuu boodo.
39. Samee dharka dhaqid
Bar eygaaga inuu dharka uga dhaqaajiyo dambiisha una soo raro mashiinka.
Dhexdhexaad 4 saac (yada) Dhig
Dambiishaada wax lagu dhaqo hortaada ku hayso oo qaado maro oo u dhiib eygaaga, haddii ay qaataan, ka dib weydii inay hoos u dhigaan, ka dibna ku abaal mari sida dharka loogu dhaqo dambiisha.
Ku celi tan dhowr jeer si ay u helaan abaalmarino badan oo ay ugu soo dhacaan dambiisha. Haddii ay seegaan qaybtan khiyaanada ah - ha u abaalgudin oo isku day mar kale.
Hadda bilaw inaad dhisto xoogaa dhaqdhaqaaq ah, sidaa darteed u sii eygaaga dharka waxoogaa yar oo ka soo baxa dambiisha, markaa waa inay madaxooda wareegaan ka hor inta ‘dhibic’ iyo abaalmarin ah.
Mar alla markii ay si kalsooni leh u dhigayaan dharka dharka dambiisha ku jira, hadda waa arrin ah in la dhiso illaa iyo inta ay la socdaan dharka ka hor inta aan la daadin.
Mar labaad sii dharka adigoo tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sii kordhaya illaa gacantaadu ku jirto mashiinka dharka lagu dhaqo. Hadda ma cadeyn kartid inay hoos u dhacayaan.
Hadda dharka waad ku ridi kartaa mashiinka oo farta ku fiiq (ama waxaad u baahan kartaa inaad shayga xoogaa kor u qaaddo) ka dibna abaalmarin markay soo qaadaan.
Mar alla markay ku kalsoonaadaan tan, ku dar tilmaantaada 'dharka maydh', abaalmarin si la mid ah.
Hadda waxaad eegi kartaa inaad dhiirrigeliso waxyaabo badan kahor intaadan abaalmarin. Dib u tilmaan mashiinka dharka lagu dhaqo ka dib markay dhigtaan hal shay oo kan labaadna ku abaal mari.
40. Ciyaar Ciyaar
Bar Eygaaga inuu u ciyaaro sidii mid dhintay. Mararka qaarkood waxaa loo yaqaanaa toogashada.
Eygaaga ha dhigo meel hoose (sinta oo dhinac ah sida aan ku duudduubnay oo kale) u yeelo gacan daaweyn ah oo daaweyn ah oo saar sankiisa oo wax yar gadaal iyo gadaal ugu dhaqaaji si madaxa eeygaaga uu u jiifto dhulka (halkii In ka rogan).
Abaal mari markay madaxoodu kujiro booskaas oo dhowr jeer ku celi.
Marka ay sidan ugu dhaqaaqayaan si la isku halleyn karo, ku dar tilmaanta 'ciyaaro dhintay' ama 'bang' ama 'seexo'.
Hadda bilaw inaad dhisto muddada ay madaxoodu ku siman yihiin dabaqa ka hor inta aan la abaalmarin.
Si ku habboon abaalmarin eygaaga 5-10 ilbidhiqsi kadib- iyo markay dabadoodu dhaqaaqin.
Hadda waad sidoo kale baabi'in kartaa xaddiga sasabashada ee aad sameyneyso oo waxaad beddeli kartaa tilmaanta, sidaas darteed waxay u egtahay sida 'qori' ama tilmaam la'aan.
41. Salaadaha tuko
Bar eygaaga inay barahooda kor dhigaan oo ay wax diidaan ka dibna madaxa u fooraraan.
Weydiiso eeygaaga inay farahooda kor u saaraan shayga (aad u sarreysa oo ay tahay inay gaarayaan - sariirtaada ama kursi).
Mar hadday cagaha kor u taagayaan shayga, hadda waxaad yeelan doontaa gacan daaweyn ka buuxo oo aad garkaaga hoostiisa geliso, sidaa darteed waxay hoos u dhigayaan madaxooda inta u dhexeysa cagaha waxayna u muuqdaan inay madaxa foorayaan.
Abaal mari markay madaxa hoos u foorarsadaan.
Ku soo celi khiyaanadan dhawr jeer illaa ay dareere tahay oo ay rajaynayaan cunto ka hooseysa cagtooda- waana inaad ku dhaqaaqdaa wax ka yar oo ka dhakhso yar gacantaas cuntada ah.
Hadda waad ‘magacaabi kartaa’ waxay ku dari kartaa astaamaha hadalka ee ‘tukada’.
Dhis waqtiga ay ‘ku baryayaan’.
42. Lacag been abuur ah
Bar Eygaaga inuu lugta kor u qaado sidii iyagoo wax saxaya.
Dhig shay dusha sare ee aan sinnayn, si aysan u ahaan mid xasilloon oo lagu istaago.
Ka caawi eygaaga inuu iskiis isu taago si lugaha hore ay hal dhinac uga yaalliin lugaha gadaalna ay dhinaca kale u ekaadaan.
Markaa waxyar u soo jiido iyaga si dhakhso leh isla marka aad aragto mid ka mid ah lugaha gadaal inuu kor u socdo (si looga fogaado sheyga) waxaad dhahdaa 'wanaagsan' iyo abaalmarin.
Ku celi dhowr jeer si ay u bilaabaan inay fahmaan in lagu abaalmarinaayo dhaqaajinta lugtooda.
Dhis waqti yar oo ay lugahoodu hawada ku jiraan ka hor intaadan abaalmarin bixin.
Kudar ku dar!
Hadda waxaan yareyn karnaa shayga ay dul taagan yihiin ama u yaryihiin ama ka sii beddelayaan walxaha si ay u billaabaan inay shayga gebi ahaanba ka sii baxaan.
Mar alla markii ay lugtooda kor ugu qaadaan waxyaabo yaryar, waxaad isku dayi kartaa inaad iyaga ku tusto inaad sameyso iyada oo aan wax hoostooda ahi haba yaraatee jirin.
43. Albaab furan
Bar eygaaga inuu furo albaabka. Xeelad aad u ficil ah!
Ku xir tooy yar oo jilicsanaanta ah xarkaha gacanka albaabka si markii loo soo jiido albaabku u furmayo.
Hadda ku dhiirrigeli eeygaaga inuu qabsado oo uu arko bilowga haddii ay qabanayaan iyo inay jiidayaan iyo in kale. Hadday uun hayaan, abaal mari. Haddii ay jiidaan - xitaa ka sii fiican.
Hada abaalmarin isku dayga jiid ama jiid ka weyn illaa aad ka hesho albaabka inuu furmo.
Waad yareyn kartaa inta toy ee ay iyagu haystaan.
44. Sariirta aado
Bar Eygaaga inuu seexdo.
Ku dhaji sariirta eygaaga oo aad ku kala firdhiso daawooyinka qaarkood sidaa darteed eeygaagu wuxuu u tagaa inuu cuno iyaga marka hore.
Ka dib sariirta ku daadiyo wax daaweyn ah si ay uga fogaadaan.
Hadda waxay ku socdaan jidkii ay ku laabanayeen sariirta, sug inay tallaabo ka qaadaan sariirta (ama in ka badan.) Oo ay ku abaalmariyaan ka qaybgalkaas.
Ku abaalmari sariirta dhawr jeer (xitaa haddii hadda uun la joogo) ka dibna tuur daaweyn iska daa si eeygaagu ula qabsado inuu u dhaqaaqo sariirta.
Mar alla markay kalsooni ku qabaan inay u dhaqaaqaan oo ay sariirta fuulaan, hadda ka sug inay wax kale ka qabtaan aan ahayn inay halkaas ku istaagaan. Hadday ahaan lahayd fadhi, ama si ku-meel-gaadh ah - laakiin si ku habboon ha u sheegin dhaqanka. Sug inta ay wax siinayaan ka dibna taas ku abaal mar.
Mar labaad, markasta iyo ka dib iska tuur daaweyn ka fog sariirta si 'dib loogu dhigo' khiyaanada.
Mar alla markii ay si kalsooni leh ugu sii socdaan sariirta oo ay jiifsadaan, dheh 'sariir' markay ku socdaan sariirta.
Hada waxaad bilaabi kartaa inaad talaabooyin kaqaado sariirta si aysan kuugu tiirsaneyn inaad sariirta udhawdahay.
Bar eygaaga inuu ku qurxiyo alaabada ay ku ciyaaraan.
Santuuqa ay ku ciyaaraan hortaada dhig oo waxaad ku siisaa toy, ka codso inay hoos u dhigaan si ay tooydu sanduuqa ugu soo degto oo u abaalmariyo.
Ku celi dhowr jeer. Haddii ay seegaan sanduuqa, ha u abaalgudin oo mar labaad ha ku siin toy-ga.
Mar alla markii ay si kalsooni leh u dhigayaan alaabta ay ku ciyaaraan dambiilaha, hadda waa arrin ah in la dhiso illaa iyo inta ay la socdaan toy-ka ka hor inta aan la daadin.
Mar labaad waxaad ku siisaa toy-ga masaafada tartiib tartiib ah u sii kordheysa illaa toy-ka laga siiyo iyaga dhawr mitir. Hadda ma cadeyn kartid inay sidoo kale dhacaan.
Hada alaabta lagu ciyaarsiinayo ayaad dhigi kartaa sagxadda oo aad farta ku fiiqi kartaa (ama waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax yar kor u qaaddo) ka dibna abaalmarin markay soo qaadaan, ka soo wareeji sagxadda ilaa dambiisha.
Markay kalsooni ku qabaan tan, ku dar tilmaantaada 'hagaag.' Si aad u dhammaystirto khiyaanada iyo abaalmarinta si la mid ah.
Tilmaamaha Dhamaystiran ee Xuduudaha Collie Australian Shepherd Mix
Maltipoo soo jiidashada aan la dafiri karin
eeyaha dheguhu way diiran yihiin inay taabtaan
intee in le'eg ayay heli doontaa isku darka pitbull adhijir Jarmal ah
shaybaarka madow ee pitbull isku dhafka ah
maltese yorkie shih tzu mix
adhijir Jarmal badhkiis bas husky ah